DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP PHOTOSMART 5510 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ọkwọ ụgbọala maka HP Photosmart 5510 Printer
Na oge a, ọtụtụ n'ime anyị nwere ma ọ dịkarịa ala ngwaọrụ 2 n'otu oge - laptọọpụ na smartphone. Ruo n'ókè ụfọdụ, ọ bụ ọbụna ihe a chọrọ n'aka ndụ, ya mere ikwu okwu. N'ezie, ụfọdụ nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị egwu. Ọ nwere ike ịbụ kọmputa na arụmọrụ na-arụ ọrụ, kọmputa, smartphones, mbadamba, nche onyunyo na ndị ọzọ. N'ụzọ doro anya, mgbe ụfọdụ, ịchọrọ ịfefe faịlụ n'etiti ha, mana ejirila wiil ndị ahụ na narị afọ nke 21!
Ọ bụ n'ihi nke a na anyị nwere ọtụtụ mmemme nke ị nwere ike ịnyefe faịlụ sitere na PC gaa na smartphone ma ọ bụ mbadamba na vice. Otu n'ime ndị a - SHAREit. Ka anyị hụ ihe dị icheiche anyị mere taa.
Nke mbụ, na isi ọrụ nke usoro a. Na ịmatakwu nke ọma, ihe omume abụọ, n'ihi na ịkwesịrị ịwụnye ngwa na smartphone gị, nke, n'eziokwu, bụ isi ihe. Ma laghachi na ihe kacha mkpa nke ọrụ ahụ. Ya mere, mgbe ị jikọtara ngwaọrụ, ịnwere ike ịnyefe foto, egwu, vidiyo, na n'ozuzu ọ bụla faịlụ ọ bụla na mpaghara abụọ. Enweghị mgbochi na olu ahụ, n'ihi na ọbụna 8GB na-agafe n'enweghị nsogbu.
O kwesiri iburu n'uche na ihe omume a na-aru ngwa ngwa. A na-ebufe faịlụ dị oke mkpa na nanị otu elekere abụọ.
Lelee faịlụ PC na ama gị
Ọ bụrụ na ị dị umengwụ dịka m nọ, ị ga-ahụ ọrụ ọrụ Remote View, nke na-enye gị ohere ịlele faịlụ site na kọmputa gị ozugbo site n'aka gị ama. Gịnị ka ọ ga-adị mkpa maka? Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ igosi ezinụlọ gị ihe, mana ịchọrọ ịga PC n'ime ụlọ ọzọ. Na ọnọdụ a, ịnwere ike ịmepụta ọnọdụ a, chọta faịlụ achọrọ ma gosipụta ya na ihuenyo ama. Ihe niile na-arụ, ihe ijuanya, n'enweghị oge ọ bụla.
I nwekwara ike ịṅụrị ọṅụ na ị nwere ike ịnweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchekwa ọ bụla. Naanị ebe m "anaghị ekwe" bụ faịlụ faịlụ na "C" mbanye. O kwesiri iburu n'uche na ihuenyo foto na egwu di n'ejighi nbudata na ngwaọrụ, mana, imaatu, aga ebido ibudata vidiyo.
Gosiputa foto site na smartphone gaa na PC
Kọmputa ụlọ gị, nke doro anya, enwere ngosi ihuenyo ka ukwuu karịa ọbụna nnukwu mpempe akwụkwọ. O dokwara anya na ibu ihuenyo ahụ, ihe na-adaba adaba ma dị jụụ bụ ịchọgharị ọdịnaya. Iji SHAREit, ọ dị ọbụna mfe iji mepụta nlele dị otú a: gbanwee ọrụ ngosi PC ma họrọ họrọ foto achọrọ - ọ ga - apụta ozugbo na kọmputa. N'ezie, site na smartphone, ị nwere ike ịgbanye site na foto, ma na mgbakwunye na nke a, a pụkwara iziga foto ozugbo na PC.
Weghachite foto gị
Gbaa ụyọkọ foto ma ugbu a, ịchọrọ ịnyefe ha na kọmpụta? Ị nweghị ike ịchọ USB, n'ihi na SHAREit ga-enyere anyị aka ọzọ. Buru na bọtịnụ "Idebe foto" na ngwa ngwa mkpanaka na mgbe obere oge sekọnd foto ga-abụ na folda prọfined na PC. Na-agbasi mbọ ike? N'ezie.
Nwee ngosi site na smartphone
Ndị ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'ihu n'ihu ọha na-eji nkwupụta mara na ọ bụ mgbe ụfọdụ ka ọ na-esiri ike ịbịaru kọmputa ahụ iji gbanwee ihe ngosi. N'ezie, n'ihi ọnọdụ dị otú ahụ, enwere njikwa ndị nwere ike iche, mana nke a bụ ngwaọrụ ọzọ a chọrọ ịzụta, ọ bụghịkwa onye ọ bụla nwere obi ụtọ na ụzọ a. Zọpụta na ọnọdụ a nwere ike gị smartphone na-agba ọsọ SHAREit. O di nwute, ọrụ ndi a na-adi na ntaneti. Nhọrọ ndị ọzọ ga-amasị m, karịsịa na-atụle na mmemme yiri nke ahụ pụkwara ịgbanwe gaa na ntinye ederede, ederede, wdg.
* Ezi atụmatụ setịpụrụ
* Ọ dịghị ihe mgbochi na ụdị faịlụ ahụ ebutere
* Mmebi na arụ ọrụ ngosi
Ya mere, SHAREit bụ ezigbo usoro mmemme, nke nwekwara ikike ịnwa gị. O nwere ọtụtụ uru, naanị nzaghachi ahụ, n'ụzọ doro anya, abụghị ihe dị ịrịba ama.
Download SHAREit n'efu
SHAREIt maka gam akporo SHAREit Guide Onye na-egwu ihe Esi edozi njehie na window.dll na-efu
SHAREit bụ ngwa cross-platform maka nkesa ngwa ngwa na nke ngwa ngwa nke ọ bụla faịlụ dị n'etiti ngwaọrụ dị iche iche.
Onye Mmepụta: SHARE